Yakachipa yakasarudzika simbi isina simbi yekushandura zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Izvo zvikamu zvikuru zvesimbi isina simbi ndeye kabhoni, chromium, nickel, uye zvimwe zvinoriumba zvinhu zvakaita se molybdenum, mhangura, uye nitrogen zvinowedzerwa. Chinhu chikuru chinobatanidza zvinhu musimbi isina chinhu ndiCr (chromium), uye chete kana zvirimo zveCr zvasvika pane imwe kukosha, iyo simbi inorwisa kuramba. Stainless simbi ine yakanakisa hunhu senge yakasarudzika simba, yakakwira kupfeka kuramba, yepamusoro ngura kuramba uye kuramba ngura. Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, michina yezvikafu, indasitiri yemagetsi, indasitiri yemidziyo uye kushongedzwa kwemba, kupedzisa indasitiri.
Lathe kugadzira chikamu chemuchina wekugadzirisa. Lathe kugadzira inonyanya kushandisa yekushandura chishandiso kutenderedza chinotenderera workpiece. Drills, reamers, reamers, matepi, kufa uye knurling maturusi anogona zvakare kushandiswa pane iyo lathe yekuenderana inoenderana. Lathes dzinowanzotsigi- kushandiswa machine miseve, discs, maoko nezvimwe workpieces pamwe kutenderera hukawanika. Ndiwo akanyanya kushandiswa mhando yemuchina chishandiso kugadzirisa mune michina kugadzira uye kugadzirisa mafekitori. Ouzhan inopa yakagadziriswa masevhisi ekugadzirisa kwesimbi isina simbi yakashandura zvikamu zvevanokosha vatengi.
Ouzhan tsika yemishini simbi isina simbi yekutendeuka zvikamu zvekugadzirisa accessories
Pashure: CNC ndarira zvikamu
Zvadaro: Tsika yakakwenenzverwa yendarira yekugaya zvikamu zvemuchina zvekushandisa
Tsika yakakwenenzverwa yendarira kutendeuka zvikamu zvemuchina ...